Dhizaini tambo dzeApple Watch yako kubva kuMonowear | Ndinobva mac
Dhizaini tambo dzeApple Watch yako kubva kuMonowear
Zviri pachena kuti nyika ye Apple Watch Iine zvakawanda zvekupa uye ndeyekuti zuva nezuva mushure mezuva tinosangana nevagadziri vatsva vanobheja pazvinhu zvitsva zvemudiki kubva kuCupertino, iyo yakakosha Apple Watch. Mune ino kesi isu tinokuratidza sarudzo nyowani mumadhizaini ekugadzira, ino nguva kubva kuMonowear.
Aya ndiwo mabhande akagadzirwa kwete chete eganda asi akave akashongedzerwa nehurongwa hwekuvhara dhizaini kuwedzera pakutakura pfungwa yeApple's Milanese tambo kune iyo Nylon zvinhu.
Monowear Vakasvetuka pabhendi rekugadzira dhizaini yezvikwata zveApple Watch uye kubva pane zvatakakwanisa kuona, pfungwa yavanopa inokwezva kwazvo. Ivo vanoshandisa simbi, curo uye nylon uye ceramics kugadzira mabhandi akasimba akachinjirwa kunguva.
Sezvauri kuona mumifananidzo inoenderana nechinyorwa ichi, iyo pfungwa yetambo yenylon yakafanana chaizvo neyaMilanese yeApple, asi kuvharwa kuri nechikepe chechikepe panzvimbo pemagineti. Kana iri tambo yesimbi yevakomana nevasikana, Musanganiswa wesimbi uye zvedongo zvinhu zvakashandiswa izvo zvinopa iro rakasiyana uye risina hanya kutaridzika.
Hapana mubvunzo kuti yakanaka sarudzo yemabhande pamitengo, pamwe yakati kwirei, asi kana tikatarisa izvo izvo Apple yakaisa pamabhandi esimbi ayo, tichaona kuti mari ichave yakaderera zvikuru. Unogona kuona zvimwe zverudzi urwu tambo pawebhu inotevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Dhizaini tambo dzeApple Watch yako kubva kuMonowear
Iyo nyowani Porsche 911 GT3 inotsigira Apple CarPlay
Nyanzvi dzezvehupfumi dzinonyevera nezvekuwedzera kwemutengo wezvigadzirwa zveApple nekuda kwezviyero zveUS.